Reraka noho ny fanararaotan'ny banky Phishers? Mankanesa any amin'ny Torolalana avy amin'ny Semalt
Ny fanaovana hosoka amin'ny aterineto dia manao dingana vaovao miaraka amin'ny phishing. Ny aterinetoNy sehatra dia loharano ara-toekarena goavam-be miaraka amin'ny tsena tsy misy fetrany. Maro ireo tranonkala sy e-varotra raharaham-barotra no mampiasa io fantsona io mba handraisany soaavy amin'ny mpanjifa maro manerana ny tranonkala - i want to buy a fake id. Ireo rafitra ara-bola toy ny banky dia manana sehatra an-tserasera, izay ahafahan'ny ankamaroan'ny fifanakalozanamitranga. Ny banky dia mijaly noho ny fanimbana ny ankamaroan'ny mpanakorontana sy ny trangam-panafody amin'ny aterineto izay miezaka mangalatra tapitrisa lavitra ny bankyireo rafitra ary koa ireo olona izay manao ny raharaham-barotra ho an'ny tenany.
Na izany aza dia afaka mampiasa ity sehatra ity ny mpandika lalàna sy ny mpanao heloka bevava hafa. MostNy trangam-pangalatra dia avy amin'ny banky na tranonkala banky hacked. Ny famonoan-tena dia miteraka ny famoronana pejin'ny klone ary koa ny tranokalan'ny klôtika iray manokanabanky. Ny hackers dia afaka mampiasa fomba toy ny spamming na fanakanana browsers hanodikodina ireo tra-boina mora raisiny mba hanomezana fanazavana sarobidyamin'ny pejy sandoka. Vokatr'izany, ny vaovao momba ny banky manokana dia mamoaka hackers, izay ahafahan'izy ireo mifantoka amin'olona an'arivony. Banksdia matetika miaritra ny fahaverezana sy ny orinasam-piantohana manome antoka azy ireo amin'ny karazana heloka bevava.
Misy fomba maro ahafahan'ny phishing miseho. Tena ilaina ny mahafantatramba hisorohana ny fanafihana mampidi-doza. Ny sasany amin'ireo fomba ireo dia mifanojo raha toa ny hafa dia mifandray amin'ny iray na roa amin'ireo fomba ireo.
Max Bell, iray amin'ireo manam-pahaizana lehiben'ny Semalt ,dia manome fahatakarana amin'ireo teknikan'ny phishing manaraka:
Ity fomba fiasa ity dia mamorona serivisy mailaka fanandevozana amin'ny mailakadia toy ny sehatra ara-drariny ara-dalàna izay ipetrahan'ny spammer ny mailaka manohy ny banky labozia sy ny fampahalalam-baovao azo antoka. Ny tanjonaeto dia ny hampivelatra ny lohahevitra amin'ny fampahafantarana ny mpanjifa. Ny sasany amin'ireo fomba fitenenana iombonana dia mampiasa io fomba io.
Ity teknika ity dia miteraka sivana mivantana. Ny hackers dia mety manana fampahalalana momba ny fifandraisanaavy amin'ilay niharam-boina nalain'izy ireo mitsikilo. Azony atao avy eo ny manosika fomba vitsivitsy hakana sary avy amin'ny mpampiasa. Fampahalalana manokanatoy ny angon-drakitra momba ny banky momba ny fidirana an-tserasera dia mety hivoaka tahaka izao.
Ity teknika ity dia mitarika ny famoronana tranonkala sandoka izay tahaka ny pejy ara-dalàna. Ny pejy tsirairay,popup, ary ny serivisy miasa ho toy ny iray amin'ny tranonkala banky ara-dalàna. Amin'ny alàlan'ny mikendry hikolokolo, ny mpanao heloka bevava dia afaka ho afakamba hampiasa teknika fanasarotana mba hahafahan'ny niharam-boina hamaly ny mailaka na hanatontosa fizahana banky amin'ny sehatra sandoka.
Ity fomba ity dia mametraka sora-pitenenana na fehezan-dalàna sasantsasany amin'ny navigateur an'ilay niharam-boina. Vokatr'izany,Ny mpangalatra dia afaka mahazo ny fidirana amin'ny fantsona rehefa mitsidika tranonkala ara-bola ara-dalàna. Ankoatra izany, azo atao ny manova azy ireoamin'ny tranonkala sandoka.
Ny hosoka amin'ny Internet dia olana iraisan'ny ankamaroan'ny orinasa banky amin'izao fotoana izao. Olona maro bemijaly isan'andro noho ny fiantraikan'ny hackers sy ireo olon-kafa mpanao heloka bevava hafa izay manao ny sasany amin'ireo fifindramonina ireo. Phishing sy spammingNy fanafihana dia mampiharihary ny fampahalalana sy ny angona mpanjifa amin'ireo olona izay milefitra amin'ny vola be. Afaka mianatra momba ny hosoka sy ny phishing ianaoamin'ny alalan'ity mpitari-dalana ity. Ankoatra izany, afaka miaro ny fomba fiasan'ny banky sy ny mpanjifa koa ianao ka manatsara ny sasany amin'izanyfepetra fiarovana amin'ny aterineto ao amin'ny tranonkalanao.